Vietnam:TAFAPETRAKA NY MASOIVOHO -
AccueilRaharaham-pirenenaVietnam:TAFAPETRAKA NY MASOIVOHO
Nohamafisina indray ny fifandraisana eo amin’ i Vietnam sy Madagasikara. Porofon’izany ny nananganana ny “consulat” vaovao eto Madagasikara , etsy Anosivavaka- Ambohimanarina, izay notokanana omaly. Ankoatra ireo fiaraha-miasa sy fifanakalozana izay efa nisy teo amin’ny firenena roa tonta nandritra ny 45 taona , dia mitohy ny fiaraha-miasa amin’ny alalan’ny fananganana tranoben’ny varotra sy ny Indostria izay hisokatra afaka andro vitsivitsy , araka ny nambaran’ny “consul” an’i Vietnamiana eto Antananarivo, Eric Ramiandrisoa Nazaralli . Nolazainy tamin’izany fa hiditra amin’ny lalindalina kokoa ary mifototra eo amin’ny lafin’ny fambolena, ny serasera ary ny eo amin’ny resaka fiompiana tantely, ny fiaraha-miasa . Nirosoana izany dingana izany mba hisian’ny fifanohanana sy ny fampandrosoana maharitra eo amin’ny firenena roa tonta. Fa ankoatra izay, dia nitondra ny teniny ihany koa ny minisitry ny Raharaham-bahiny Vietnamiana , Ha Kim Ngoc, fa mankasitraka tanteraka ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara i Vietnam, ary tsara ny hitohizan’izany hatrany.
Tonga teny an-toerana nanatrika ity fanokanana ity ny solontenan’ny governemanta, izay nahitana ny ministra lefitry ny Raharaham-bahiny,Bary Rafatrolaza Emmanuel; minisitry ny Fampananan’asa sy ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak’asa, Toto Marie Lydia Raharimalala; minisitry ny Jono, Gilbert François; Rivo Rakotovao, Minisi-panjakana miadidy ny fambolena sy ny fiompiana sy ny maro hafa . Samy nilaza sy nitondra ny teniny amin’ny fahitan’izy ireo ny tombontsoan’i Madagasikara amin’ny fandraisana ity fihaonana an-tampon’ny Frankofonia andiany faha-16 ity moa izy ireo tamin’izany. Marihina fa isaka ny roa taona no hanaovana ity hetsika Frankofonia ity ary voafidy handray izany i Madagasikara tamin’ity andiany faha-16 ity. Tsy mitsanga-menatra mihitsy noho izany ny mpitondra fanjakana tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny vahoaka Malagasy satria samy nanao izay ho afany ny rehetra mba hahatomombana ity Frankofonia ity.
Nolanian’ny solombavambahoaka ny fiandohan’ny herinandro teo ny lalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena. Nanome ny heviny mahakasika izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, omaly tany Toliara rehefa nanontanian’ny mpanao gazety momba izany. Araka ny fanambarany dia tombontsoan’ny rehetra ...Tohiny